Fumanisa iimaski ezintlanu ezinkulu zesikhumba esenziwe ekhaya | IBezzia
5 iimaski ezenziwe ekhaya ukubonisa ulusu lwakho entwasahlobo
Susana Garcia | 01/05/2021 20:00 | Ubuhle, Iimveliso zobuhle
Ukuba sithetha ngemaski yendalo kunye neyasekhaya yokunyamekela iinwele, ngoku lithuba lokumaski ukuphucula ulusu lobuso okanye lomzimba kule ntwasahlobo. Ezi iimaski zinokusetyenziswa naphina apho sifuna khona zilunge kakhulu kukhathalelo lolusu. Makhe sibone indlela yokwenza ezinye zezona zinomdla kakhulu ukuba sibe nolusu olugqibeleleyo esinokulunxiba ngempahla yasentwasahlobo.
Las iimaski ezenziwe ekhaya zinokwenziwa nazo zonke iintlobo zezithakos. Singalondla ulusu ngeendlela ezininzi, sisebenzisa oko indalo isinika kona ukuphucula imizimba yethu. Ezi ntlobo zeemaski zilula ukuzenza kwaye ziluncedo kakhulu kuba zenziwe ekhaya zinezinto ezimbalwa kwaye zibuphucula kakhulu ubuso neempawu zazo zendalo.
1 Imaski yokuhlaziya ulusu nge-oatmeal
2 Iimaski zolusu olubuthathaka kunye nekhala
3 Imaski ye-Astringent enelamuni
4 Imaski yolusu olomileyo ngeoyile yeoli
5 Ukukhupha imaski ngeswekile
Imaski yokuhlaziya ulusu nge-oatmeal
I-Oatmeal sisithako esinceda izinto ezininzi. Ayisiyo kuphela ukutya okunesondlo okusetyenziswa kwiindlela ezininzi zokupheka, kodwa inegalelo kwizinto ezinkulu kulusu. Inkqubo ye- I-oatmeal inamandla athile exfoliating ahlaziya isikhumba kuba kwangaxeshanye iyayikhathalela kwaye iyanceda ukugcina ukufuma kuyo. Ungasebenzisa ubusi ukudibanisa kwaye ufumane isiphumo esihle. Ubusi buyakwazi ukuntywilisela ulusu kwaye buye bulwe neengxaki ezinje ngamabala. Zizinto ezimbini ekulula ukuzisebenzisa ezifumaneka lula. Yisebenzise nge-massage elula kulusu kwaye ushiye imizuzu engamashumi amabini ukuyisusa kamva.
Iimaski zolusu olubuthathaka kunye nekhala
I-Aloe vera sesinye sezithako zendalo oza kuzisebenzisa kakhulu ukuba ufuna ukukhathalela ulusu lwakho, nokuba luyintoni na. Kuyacetyiswa kakhulu kulusu olubuthathaka kuba kuyanceda moisturize, gcina ulusu luthambile kwaye lucocekile, konke kwisithako esinye. Ithoba ulusu ngokubomvu kwaye ungayisebenzisa njengasemva kwelanga ukukhathalela ulusu lwakho emva kokuvezwa lilanga. Eyona aloe vera yendalo ifunyenwe kwisityalo, usika amagqabi kwaye ususe ijeli abanayo ngaphakathi, kodwa sinokuyithenga ngokulula kwiivenkile zemifuno ukuba siyisebenzise kulusu. Sisigqubuthelo sokuthambisa ulusu olubomvu kwaye ulunike amanzi.
Imaski ye-Astringent enelamuni
Ulusu olunamafutha luya kuba nefayile ye- ingxaki ye-sebum engaphezulu ethi ekugqibeleni ivelise ukungcola okuninzi. Elinye lamanyathelo okuqala ekufuneka sikwenzile kukuzama ukulawula i-sebum eyenziweyo kulusu. Kungenxa yoko le nto imasi yejusi yelamuni igqibelele. Inokudityaniswa nobusi obuncinci okanye iqanda elimhlophe, njengoko zithambisa kodwa azongezioli kulusu. Ilamuni inokuchaphazela ulusu ukuba sibhentsiswe lilanga kamva, ke kungcono ukusebenzisa le maski ebusuku.
Imaski yolusu olomileyo ngeoyile yeoli
Ioyile yomnquma ihlala ikhitshi lethu kwaye ikwangumxube wesondlo kakhulu enokusetyenziswa kwimaski yobuso. Iyathambisa kakhulu kwaye akufuneki isetyenziswe kulusu olunamafutha, kodwa ilungele ezomileyo. Ukuba ulusu lwakho lomile ungasebenzisa amacephe ambalwa eoyile yomnquma kunye neqanda elimhlophe ukuxuba. Uya kufumana ulusu olunamanzi ngakumbi nolukhanyayo ngokusetyenziswa kwale maski.
Ukukhupha imaski ngeswekile
Iswekile, ukongeza ekusebenziseni iidessert, kukukhuhla okukhulu. Ukuba uxuba kancinci ngepunipoon yeoyile yomnquma uya kuba nesicoci esikhulu kulusu lwakho. Ungayisebenzisa kuphela emilebeni okanye ebusweni. Massage kwaye ucoce ubuso bakho rhoqo emva koko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » 5 iimaski ezenziwe ekhaya ukubonisa ulusu lwakho entwasahlobo